Mudanayaasha Golaha Wakiilada Somaliland Oo Cod Gacan Taaga Ku Ansixiyay Wasiiro, wasiiro Ku Xigeeno Iyo Gudoomiye Ku Xigeenka Hay’adda Shaqaalaha | Berberatoday.com
Mudanayaasha Golaha Wakiilada Somaliland Oo Cod Gacan Taaga Ku Ansixiyay Wasiiro, wasiiro Ku Xigeeno Iyo Gudoomiye Ku Xigeenka Hay’adda Shaqaalaha
Hargeysa(Berberatoday.com)-Xildhibaanada golaha wakiillada Somaliland ayaa maanta kalfadhi ay iskugu yimaadeen waxa cod gacan taaaga ku ansixiyen xubno iskugu jiran wasiiro, wasiiro ku xigeen iyo gudoomiye ku xigeenka hay’adda shaqaalaha oo dhamaantood madaxwaynaha Somaliland xilka u wada magacaabay.
Waxaana kalfadhigan oo ay kasoo xadireen badibada xildhibaanada golaha wakiilada oo ahaa 51 xildhibaan gudoominayay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada ahna kusimaha gudoomiyaha mudane Baashe Maxamed Faarax.
Waxaana xildhibaanadani ay dood dheer ka dib ay cod gacan taaga ku ansixiyeen masuuliyiinta dhaawaan lasoo wad magaacabay.
Waxaana masuuliyiintani lasoo magacaabay ay kala ahaayeen Wasiirka Ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland Xussen Deyr , Wasirul dawlaha Amniga ee Wasaarad Arimaha Gudaha Maxamed Muuse Diiriye , Wasiir ku xigeenka Gashaandhiga Maxamuud Jamaac Warsame , Wasiir ku xigeenka wasaarada xidhiidhka golayasha Nasir Aw jeex iyo gudoomiye ku xigeenka hayaada Shaqaalaha Maxamuud Cabdilaahi Xarbi .
Waxana sidaasi ku ansaxay masuuliyiintani dhawaan madaxwayne siilaanyo xilalka u magacaabay.